I-Baron's Villa (enechibi kunye nepaki)
I-villa yembali yobunewunewu ijikelezwe yipaki yayo emangalisayo ebekwe kumhlaba weehektare ezi-4.5.
Ecaleni kwendlu kukho ichibi elikhulu, elenzelwe abantu abangama-20. Ubungakanani yi 18/8m.
Kwi villa kukho 6 amagumbi okulala 3 ukusuka kuwo iisuti. Enye yisuti enkulu kwaye amanye amabini anamagumbi amabini - igumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlala.
Igumbi ngalinye lokulala linegumbi lalo lokuhlambela.
Igumbi lokuhlala elikhulu elinye, igumbi lokuhlala leTV, amagumbi amabini okutyela, igumbi lokuhlala elinye esilisebenzisela iikhosi zeyoga esizibonakalise ngokuzicela.
600 sq.m 3 umgangatho villa
Kumgangatho ophantsi kukho umnyango omkhulu wokungena, igumbi lokuhlala elikhulu, igumbi lokuhlala elincinane elinendawo yomlilo, igumbi lokutyela elikhulu elinendawo yomlilo, igumbi lokutyela losapho elinendawo yomlilo kunye nekhitshi elinegumbi loncedo. Kwakhona kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokuhlambela leendwendwe.
Indlu inezinyuko ezimbini. Izinyuko eziphambili zikhokelela kumgangatho wokuqala apho kukho igumbi lokulala eliphambili elinendawo yomlilo enegumbi lokuhlambela layo, amagumbi amabini okulala eendwendwe kunye nezawo zokuhlambela. Igumbi elinye lokulala linendawo yomlilo kunye nethafa kunye nenye balcony.
Isitepisi sesibini sikwenye indawo yendlu kwaye sikhokelela kumgangatho wokuqala kunye nomgangatho wesibini. Umgangatho wesithathu unamagumbi okulala amathathu, amabini kuwo anamagumbi awo okuhlala kwaye igumbi ngalinye linegumbi lalo lokuhlambela. Kwakhona emgangathweni kukho indawo yokufunda kunye nelinye igumbi lokuhlala.
Onke amagumbi okulala ane air conditioning. Indlu ine-wifi yasimahla
Ijikelezwe nezinye iivillas zabucala, imizuzu emi-3-4 ngemoto ukusuka ecittà della Pieve, iyure enesiqingatha ukusuka eFlorence kunye neyure kuphela kude neRoma!
sinika iindwendwe zethu izifundo zokupheka kwiTuscan kunye ne-Umbrian cuisine.
Umnxeba nje okanye umyalezo kude kwaye ndiza kukunceda ngayo yonke into!